သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဆိုက်ကိုအပေါ်ဘောင်းနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ကိုဘယ်လို - ၎င်း၏ Techschool
ကျွန်တော်တစ်ဦးဒေါ်လာစျေးတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်တစ်စုံတစ်ယောက်တုံမှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းတစ်ခုကဆိုပါတယ်သို့မဟုတ် စုပေါင်း. သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်ကျနော်တို့သူဌေးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကပြောသည်ကြီးစွာသောစာချုပ်ကပြောသည်ရေးစပ်နှင့်တဦးတည်းနှင့်အားလုံးစိုးရိမ်ထိတ်လန်ပေါ်လာဒီ "သားရဲ၏" လှုပ်ရှားမှုမက်ထရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုတယ်လျက်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် Decrease ဘောင်းနှုန်းသင့် WordPress ကိုဆိုက်ပေါ်
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဆိုက်ကိုအပေါ်ဘောင်းနှုန်းလျော့နည်းကျဆင်း
ဘောင်းနှုန်းဟာအသုံးပြုသူကျေနပ်မှု Metric ဖြစ်ပါသည်
တစ်ဦးကအမြင့်ဘောင်းနှုန်း WordPress ကို SEO ဆိုသည်မှာအဘို့မကောင်းပါဖြစ်ပါသည်
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဆိုက်ကိုအပေါ်ဘောင်းနှုန်းလျော့ကျလာ
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဆိုက်များ၏မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်
WordPress ကိုဆိုက်အညွှန်း Enhance
သင့်ရဲ့ SEO ဆိုသည်မှာနှင့် PPC Advertising ကြော်ငြာ Enhance
Broken Links များအနည်ထိုင်
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကြောင်းတုံနှုန်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအခါအောက်မှာသူအများအပြားပွူယခုအချိန်အထိစိုးရိမ်နေကြဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောတုံနှင့် ပတ်သက်. အရာ, ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုမက်ထရစ်အကြောင်းကိုလဲလုံးဝမသိဘူးစိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ယူဆရဖြစ်ပါသည် ။ ကောင်းမြတ်ခြင်း web ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့သော naivety ။ ဒါဟာကြောက်ခမန်းလိလိင်သကဲ့သို့မိန်းမောတွေဝေပါပဲ။
ဤတွင်အမှန်တရားတစ်ခုလျှပ်တစ်ပြက်သို့သော်င်: ဘောင်းနှုန်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မရှိဘဲလမ်းကြောင်းစာမျက်နှာထက်အခြားမည်သည့်စာမကျြနှာသင့် site စွန့်ခွာသူအလူတစ်ဦးချင်းစီ၏အမှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အများကြီး Confounding? ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအချိန်တွေအတွက်တုံမှုနှုန်းကိုခေါ်ဒီသတ္တဝါကိုချွတ်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏မျက်နှာဖုံးရုတ်သိမ်းပေးရန်သငျ့သညျ။
ဘယ်လိုအကြောင်းကိုငါတို့သည်အချို့သောအလားအလာက Google တွင် "WordPress ကိုအထူးကု" ကိုတောင်းသည်မှာ, သင့်ရဲ့ site ကိုကနဦးဆယ် (10) ကြားတွင်တက်လာသငျသညျ determinedly သည်ဤ WordPress ကို SEO ဆိုသည်မှာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အပြီးလုယူသောအချက်ကိုအလငျး၌အကြောင်းကိုအခြေခံအားဖြင့်ကြွလာ။ ဖျောင်းဖျ accept ပစ္စုပ္ပန် "ကိုပြီးပြည့်စုံသော WordPress ကိုအတိုင်ပင်ခံ Choose လုပ်နည်း" သင်၏မှန်းဆသင် Google ကျားကန်ပု meta ပုံဖော်တင်ဆက်ထူးခြားသောကျေးဇူးတင်စကားကြည့်ကတည်းကသူတို့သင့် site မှ navigate ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ဘလော့ဂ် entry ကိုသင့်ရဲ့ကျမ်းပိုဒ်စာမျက်နှာ, ဒါမှမဟုတ်ပဲ "အပိုင်း" သို့လှည့်။
သူတို့သည်သင်၏ site ကိုမှမရသည့်အခါမည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့လျှင်မြန်စွာသင်သည်သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အဘယ်အရာကိုမဟုတျပါတွေ့ရှိချက်ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ကျောဖမ်း, မျိုးအခြား URL ကိုထိမှန်ဒါမှမဟုတ် window ကိုသူတို့ရဲ့ PC ကိုထွက်ဆမ်း။ သင့်ရဲ့ site ၏ကျန်ရစ်သမျှနှင့်အတူချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲလမ်းကြောင်းစာမျက်နှာထွက်ခွာ၏ရိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်တုံအဖြစ်လူသိများသည်။
သငျသညျအခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်ထိုအပြန်ပြီးခြေရာခံ, ထိုနောက်မှသင့်ရဲ့ site ကိုမှသှားသောတစ်ဦးချင်းစီ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသူတို့နှင့်အတူနှိုငျးယှဉျအခါ, သင်တစ်ဦးအချိုးအစားအရ။ တစ်မှုနှုန်းဖို့အချိုးအစားတစ်ခုအနက် Make နှင့်သင်တစ်ဦးတုံမှုနှုန်းရှိသည်။
။ , ဤတွင်ထိထိရောက်ရောက်စိတ်ကူးကိုဖော်ပြနေတဲ့ snappy အောင်အတွက်စိမ်ဖို့သင်္ချာ၏ဤနည်းနည်းခွင့်ပြုသင့်ရဲ့ WordPress ကိုအကြံပေး post ကိုဆိုပါစို့ 1,000 ဧည့်သည်များတယ်နှင့် 750 ပြန်လည်သုံးသပ်၏ပါတီအားအတွက်ချက်ချင်းပို့စ်ကျန်ရှိနေသေးသော, သင့်တုံနှုန်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်:
750 / 1000 = 0.75 = 75%; x က 100% နှုန်းမှာ = တုံ / စုစုပေါင်းဧည့်သည်များ bounce
အခါသင့်တုံနှုန်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုသငျသညျသင့်၏ငါတို့သည်အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားသည် "အဘယ်အရာကို" ရှိကတည်းက? ကြှနျတေျာ့ပုံမှန်ကျည်အောင်နေစဉ်, ငါတုံနှုန်းထားများများအတွက်အခြေခံစံနှုန်းအလယ်ပိုင်းကိုပါရှိသောကြောင့် Neil Patel ကကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ infographics ကူးကြ၏။ အဆိုပါ rundown ပြီးသွား 98% သကဲ့သို့မြင့်မားသောတုံနှုန်းထားများနှင့်အတူကို web ဂျာနယ်များဖြစ်ကြသည် 70 မှာနှုတ်ဆက်ခြင်းစာမျက်နှာများမှတဆင့် trailed - 90 မှာ 40% နဲ့ content ဒေသမူများ - 60% ။ 30 မှာလက်လီဒေသခံတွေ trailed တစ်ဝက်, - - ခဲခေတ်က်ဘ်ဆိုက်များ 20 မှာချဉ်းကပ် 40% နှင့် 10 မှာအုပ်ချုပ်ရေးနေရာများအားဖြင့် trailed - 30% ။
by နဲ့ကြီးမားတဲ့, သင်သည်သင်၏ WordPress ကိုတုံနှုန်းကို 60% ကျော်ပါလျှင်အလေးပေးခံရဖို့သင့်၏။ ဝက်သည်ကြီးအောက်မှာသို့သော်သင်သည် 10% အောက်မှာဂိုးသွင်းနိုငျသောဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျတောက်ပပါပဲ။ သင့်ရဲ့မှတျတမျးတငျထားပြပွဲဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့တုံနှုန်းကိုသငျသညျများကိုတွက်ချက် (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲစဉ်းစား) သင့်၏, သို့သော်ယင်းအသိအမြင်ချွေးဖို့မကြိုးစားပါ။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ပြီးသား 95% တစ်တုံနှုန်းမှာစာရင်းသွင်း, သေးထို့နောက်ချပွနျလညျထူထောငျအစီအမံ actualizing ၏ပါတီအားအတွက် 65% အထိဥပမာ, သူတို့အားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကဒီမှာကြံစည်လိမ့်မည်ဟုဆောင်ခဲ့သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်, သင် bubbly pop ်၏ သောက 60% ကျော်မယ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအတောအတွင်းတွင်သင်သင်တန်းကိစ္စအဖြစ်အဆင့်မြင့်တုံနှုန်းထားများရပါလိမ့်မယ်သေချာ WordPress ကိုဒေသမူ၏အမြိုးမြိုး, ပင်ပစ္စည်းဥစ္စာ, ရှိပါတယ်မှတ်မိဖို့သင့်၏။ တစ်ဦးကလျောက်ပတ်သောပုံဥပမာကိုတစ်စာမျက်နှာကို WordPress site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောတုံနှုန်းထားများရှိလိမ့်မယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ကိစ္စတွင်အချို့သောအခြားစာမျက်နှာလှုံ့ဆျောပေးပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးသင်သည်စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းအဖြစ် clients များသူတို့ရှာဖွေနေပါတယ်အဓိပ္ပါယ်ပါရှိသည်သောစာမျက်နှာအတိတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပါဘူးကတည်းကက်ဘ်ဆိုက်များ, ဥပမာ, အွန်လိုင်းစကားလုံးကိုးကားထိုနည်းတူမြင့်မားတုံနှုန်းထားများနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့တုံနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်နေချိန်တွင်ဤအစဉျးစားဆငျခွ၏အသီးအသီးကိုသတိရပါ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အားလုံးအကြောင်းပြချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, 60% ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွန်းတုံနှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းကျော်, သင်အန္တရာယ်ဇုန်၌ရှိကြ၏။ 40 - 60 သင်သည်ကျန်ရစ်သူပါတယ်%, 10 - သင်ဒဏ်ငွေလုပ်နေလုပ်နေ 40% နဲ့ <10%, သင်ကအလှဆင်ထိုက်။
ကျနော်တို့ထိထိရောက်ရောက်အဘယ်အရာနှင့်တဲ့အခါမှာလုံခြုံပါတယ်။ အများကြီးရန်သင့်ကြောင်းမြင့်မားသောတုံမှုနှုန်းမှာတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တာကြိုးစားကြဘို့မဆိုအမှု၌အဘယျကွောငျ့ကကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါ့မလား အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးရာမှာပွိုနိမ့်တုံမှုနှုန်းတက်ထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သနည်း ယခုကြှနျုပျတို့၏အဖြစ်အစီအစဉ်များရနိုင်အောင်ငါမြန်ဆန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါ့ထံသို့မြင့်မားသောတုံမှုနှုန်းနှင့်အတူ site တစ်ခုသရုပ်ပြ, ငါသည်သင်ဖို့စိတ်ပျက် clients များနှင့်အတူ site တစ်ခုကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်း-စာမျက်နှာဒေသခံအွန်လိုင်းစကားလုံးကိုးကား, အဆိုပါ Million Dollar မူလစာမျက်နှာ et al မှလွဲ. တစ်ဦးမြင့်မားသောတုံမှုနှုန်းနှင့်အတူမည်သည့် site ကိုဆင်းရဲသောသူသည် client ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတုံနှုန်းမှာအနိမ့်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သင်မှန်တစ်ခုခုပြီးမြောက်ပါတယ်, သင်ဘာလုပ်နေ၏ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏကိုပြီးမြောက်သင့်၏။ ဒါကြောင့်လည်းမြင့်မားသောင်သောဖြစ်ရပ်၌, သင်ပိုကောင်း client ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့ယူနစ်အဖြစ် run သောခိုင်ခိုင်လုံလုံပေါ်မှာရှိသမျှအတူတကွသင့်အိမ်ရရန်ရှိသည် ...
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဆိုက်နှင့်သင်သည်လိမ့်မယ်ဖွယ်ရှိအမြတ်ပေးထား, သင်ဓလေ့ထုံးတမ်း perusers, ဖောက်သည်များ, သို့မဟုတ်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံဖို့အရေးမကြီးဧည့်သည်များကျော်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် client များဆီသို့ပြန်သွားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီသင့် site ၏ဘာပဲအကြွင်းအကျန်ကိုကြည့်ဖို့ပတ်ပတ်လည်ကပ်ဘဲနေလျှင်သင်တစ်ဦးဒုက္ခအချိန်ဒီပွီးမွောကျရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီသည်သင်၏တင်ဆက်မှုစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပြုကြသောဖြစ်ရပ်အတွက်ချွတ် bounce ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျတရားဝင်ရန်ပွဲဆုံးရှုံးသွားပါပြီ။
သူတို့ကိုသင်သင်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့ပါပဲအမှု၌ action ကိုဖမ်းမိယူဆက်သွယ်မှုများနှင့်အကြံပြုချက်ဖမ်းယူဖို့သင့်အလားအလာလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးကအနိမ့်တုံနှုန်းသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ရောက်လာချက်ချင်းသင့်ရဲ့ site ကိုထွက်ခွာကြသည်မဟုတ်သေချာသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
တစ်ဦးကလျောက်ပတ်သောအမှုအလားအလာသင်တို့ကိုခေါ်ကြောင်းတောင်းဆိုကြောင်းတစ်စာမျက်နှာကို WordPress site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ 1000 တစ်ဦးချင်းစီစာမကျြနှာပျေါတှငျရနှင့် 800 သင်တို့ကိုခေါ်ဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျမသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့တုံနှုန်းကို 80% သောဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 100% ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည်ဂိုးသွင်း။
နောက်ထပ်အမှု: ရဲ့သင်သည်သင်၏တဲ့ item စေလွှတ်မရှိသေးပေဆိုပါစို့, သင်၏တင်ဆက်မှုစာမျက်နှာ၏အဆုံးဆီသို့, သငျသညျအုပျစုကြီးထွားရန်သင့် web-based လူမှုကွန်ရက်မှတ်တမ်းများမှဆက်သွယ်မှုများကိုထည့်သွင်း။ သငျသညျမသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ site ကိုမြင့်မားသောတုံနှုန်းကိုကူညီမှုကိုရယူရန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေသင့်ရဲ့အုပ်စုသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတက်လေဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ CTA သင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်အခြားစာမျက်နှာ (ဥပမာတောင်းဆိုမှုကိုသို့မဟုတ်စာချုပ်အသွင်သဏ္ဌာန်) ကိုအလားအလာကိုယူပြီးပါဝင်သည်လျှင် may သကဲ့သို့, သင်တစ်ဦးမြင့်မားသောတုံမှုနှုန်းနှင့်အတူမြင့်မားအသွင်ပြောင်းမှုနှုန်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်သည်ကိုရလိမ့်မည်။ နှစ်ဦးအတူတကွမသွားနိုင် - မီးနဲ့ရေစတိုင်။
client ကိုသင့်ရဲ့မှာပါတဲ့နည်းလမ်းများတွင်မဆိုသင့်စာမျက်နှာနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောအခြိနျကာလ၏ဘာပဲအရှည်, သင်အပြောင်းအလဲရှိသည်။ သူတို့သည်သင်၏ချိတ်ဆက်စာမျက်နှာများကျန်ကြွင်းသမျှနှင့်အတူပူးပေါင်းခြင်းမရှိဘဲစွန့်ခွာသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သငျသညျမွငျ့မားတုံနှုန်းမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ ထိုနောက်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင် ...
Bam! ဤတွင်ကြောင့်လုံလောက်စွာသတိပြုမိခံရဖို့ထွက်မတ်တပ်ရပ်သင့်၏တစ်ခုခုပါပဲ။ ဘာ? တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့လုပ်နေလုပ်နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ထွက်နှငျ့သငျ SEO ဆိုသည်မှာသတ်မှတ်သည့်အခါအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက၏အကောင့်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာ, ကို web crawler ကနေ "အခမဲ့" လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ, အသွင်ပြောင်းနှုန်းထားများနှင့် client ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာလဲ
အတည်ပြု, သင်ရိုးရှင်းစွာကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်များမှလှုပ်ရှားမှုသို့သျောလညျးသငျသညျ SEO ဆိုသည်မှာအမြတ်ထုတ်နေသောဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာများစွာသောစာချုပ်ပေါ်မှာငါတို့၏ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားနေကြရနိုငျသညျ။ သင်အမှန်တကယ်စားပွဲပေါ်ငွေသားထွက်ခွာပါတယ်။
အဘယျကွောငျ့လဲ? ပထမဦးစွာအရှိဆုံးအွန်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများက်ဘ်ဆိုက်အညွှန်းကိန်းကနေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြီးမားစိမ်းရ။ ရှင်းနေသည်မှာ, သင်မေ့လျော့ခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။ အပြင်ကို web ရှာဖွေရေး tools များအားဖွငျ့အစီအစဉ်များကိုရှာဖွေခဲ့သူယေဘုယျလူဦးရေအများဆုံးဖျောင်းဖျဝယ်ယူသူဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမသံသယ, SEO ဆိုသည်မှာ thaaat မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ထို့အပွငျမွငျ့မားတုံနှုန်းထားများသွင်းယူသင်၌အားကြီးသော SEO ဆိုသည်မှာပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်သောထုံးစံမဟုတ်ပါဘူး။
ဤသည်ကို Google အင်းဆက်ပိုးမွှားမြင့်မားသောတုံနှုန်းထားများဘာသာပြန်ဆိုသောထုံးစံဖြစ်ပါသည်: ပြည်သူ့သူတို့သည်သင့် unessential င်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ရောက်ရှိမည်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ site ကိုထွက်ခွာနေကြသည်။ သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ် SEO ဆိုသည်မှာ positioning ကိုထိုက်ပါဘူးဒါသင်, မဆိုလေးစားမှုကိုမပေးပါဘူး။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို, သင့်ကို WordPress site ကိုနောက်ကျောမှတွန်းနှင့်သင်၏အတိုက်အခံသင့်ရဲ့အနေအထားများနှင့်လှုပ်ရှားမှုကြာနေသည်။ တစ်ဦးကမြင့်မားသောတုံနှုန်းကိုအမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပဏာမ set ကိုတက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးကျဆင်းစေသင့်ပါတယ်။ ပြားချပ်ချပ်အချိန်မ၌, သင်အွန်လိုင်းအောင်မြင်မှုရန်သင့်လမ်းပေါ် excepting ခဲ့ပြီးကြောင်းကိုမြင့်သောတုံနှုန်းကို squash ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သွားမီ, ငါရိုးရှင်းစွာသူတို့ကိုမဖတ်အလျင်အမြန်ဤအကြံပြုချက်များ actualize ရန်သင့်အားအားပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်င်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ WordPress ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း invigorating နေကတည်းက, သင်ကနေစဉ်အချိန်အတွင်းတချို့ကောင်းသောကြိမ်ဖုံးရမည်။ ချက်ချင်းပဲ, ဒီမှာကြှနျုပျတို့သညျသှား ...
[ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားအလာလေ့လာ] ငါတို့စွယ်စုံလျှောက်လွှာနဲ့ Desktop ပေါ်မှာငါတို့ကို item ၏တိုးမောင်းကြောင့်အသိပညာ၏သော့ချက်-bits ပေးသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းဇာတ်စင်ပေါ်မှာငါတို့ကို item အသုံးချဖို့နေကြသည်တိကျစွာပုံကိုဖော်ပြသည်။ - ဂျက်ဖရီ Fluhr, CEO ဖြစ်သူ SpreeCast
အဲဒီကရေတိုနှင့်တာရှည်လား သင်ဘယ်လိုကိစ္စတည်ရှိသည်ဘယ်မှာသင်မသိသောသောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင်သင်၏ WordPress ကို site ပေါ်တွင်တုံမှုနှုန်းကျဆင်းသွားမည်နည်း အနည်းငယ်သောသုတေသနပြောလိုက်ပါ Off-the-ဂရပ်တုံနှုန်းထားများကူညီမှုကိုရယူရန်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျကို set up ရန်သင့်အားကူညီဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်သင်၏ relational စကားလုံးနှင့်ပစ္စည်းများကိုအမေရိကန် perusers အဘို့အဓိပ်ပာနေကြသည်သို့သော်တရုတ်ထံမှ perusers အတွက်ဆွဲပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုသင့်ရဲ့ perusers မြားကိုသြဒိနိတ်ပါဘူး။ သင်၏မြင့်တုံအသစ်သို့မဟုတ်ပြန်လာဧည့်သည်များနှင့်အတူဖော်ထုတ်သလဲ? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကတစ်ဦးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအရာပါပဲ, သင့်ရဲ့ site ကိုခရီးဆောင် clients များ disillusions ။
ဒါဟာဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သင်၏မြင့်တုံမှုနှုန်းသို့သော်သင်သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုအာရုံစူးစိုက်မဟုတ်လျှင်သင်သိဘယ်တော့မှအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများမှပြုပြင်တာတွေနိုင်ပါသည်။ ဒီ, သင်ဥပမာ Google Analytics, Piwik, Crazy ဥ, Clicky, နဲ့ Web Trends ရုံစုံတွဲတစ်တွဲပြောတစ်ခုစာမေးပွဲ device ကိုလိုအပ်သည်။
လူမှုစီးပွားကနေကုန်းမြေအကျယ်အဝန်း, client ကိုအကငျြ့နှင့်ဧည့်သည်များကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းတာကြားတွင်အသုံးပြု watchwords မှအရာအားလုံးကိုဆင်ခြင်။ ဒီခရီးလမ်းအတွက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် - သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ပေါ်တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုအားလုံးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖုံးရမည်။ ငါ့ဓာတုဗေဒပညာပေးကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးဖို့အသုံးပြုသောအရာဖြစ်၏ - သင့်လက်ချောင်းထိပ်ပေါ်ဤအရာများကိုရှိသည်, သို့မဟုတ်အိမ်ပြန်နှင့် Polytechnic အတွက်ရွေးချယ်ပါ။ haha, ကြီးသောအဟောင်းအခွအေန။
တစ်မိနစ်အဘို့, ဘယ်လိုအကြောင်းကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိတစ်ဖွဲ့လုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်လွှဲကျနော်တို့ကစား။ သငျသညျလတ်တလော Audi ကားမော်တော်ယာဉ်ရှာနေကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။ အတိအကျဖြစ်ဖို့တစ်ဦးကမှောင်မိုက်ရတဲ့အရာတွေ Audi A4 ။ ကြောင်းမွေးကင်းစကလေးကယ့်ကိုအမြန် stacks ကတည်းက Google ကအတွင်းမူလတန်းရလဒ်ကို, Audi ရဲ့စစ်မှန် site ကိုမဟုတ်ပါဘူးထိုနည်းတူကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။
သင်အမှန်တကယ်ယခု မှစ. တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်သင့်ရဲ့ drive ကိုလမ်းဆင်းဤအချိန်ကြောင်းနဂါးမောင်းထုတ်ရန် propelled ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအချိန်ချိုးအရှည်ကြာနှင့်စကြဝဠာတစ်ဝှမ်းတစ်လှည့်လည်ခရီးသီးနှံများကိုပုံမှတစ်မှန်းဆအပေါ်သို့ "newcars4.com" Google ကကိုသွား Audi A15 ရှာခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်း။ သင်တို့ပတ်လည်ကပ်သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာအခြားသင့်ရဲ့ $ 30,000 နှစ်ကောင်သုံးဖြုန်းနိုင်မလား? ငါအလယ်အလတ်က်ဘ်ဆိုက်များအမှန်တကယ်သင်သည်ထဲကဘဝတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌, ထကိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါသိ၏။
သငျသညျငွေတွေကိုဖြုန်းတီးပစ်နေတဲ့သူတွေကိုတန်ဖိုးရှိသောမိနစ်တိုင်းတဦးတည်းကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဆိုက်သီးနှံများကိုပုံမှသာထာဝရကြာလျှင်သင် newcars4.com ထံမှယခု မှစ. တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်သင့် Audi A15 ရလိမ့်မယ်အဲဒီမှာဘယ်အာမခံချက်ရှိသနည်း တစ်ဦးကအလယ်အလတ် site ကိုအများကြီးရှိရာသို့အလျင်အမြန်သူတို့ဘာသင်မြင်ထက်နောက်ကျောဖမ်းနှိပ်အလားအလာမှုတ်သွင်းကြလိမ့်မယ်, ငါတို့အခွအေနေအဘို့ဖြစ်သောငါဝေးလွန်းယူစေခြင်းငှါ, သေးသောကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုအမှတ်ရစေတဲ့တစ်တန်စိတ်ထဲသောမြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, အတည်ပြု 're ထွက်ချပြီး။ ကျနော်တို့သငျ့ WordPress ကို 's Page Load အချိန်ကိုလျှော့ချရန်ကိုဘယ်လိုများတွင်ကျယ်ပြန့်ဤအမှုပြည့်နှက်နေလေသည်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါအတိုး၏အမှတ်သို့ delve လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ယခုကြှနျုပျတို့၏အဖြစ်ပဉ္စမယန္တရား၌ဤကလေးသည်ရှိသည်, ကျနော်တို့က Parkway hit မရှိသေးပေ။ WordPress ကို site ကိုလမ်းကြောင်းဘယ်လိုဒီနိမ့်တုံနှုန်းထားများသနည်း ဒါဟာအခြေခံင်; တစ်ခုအံ့သြဖွယ်လမ်းကြောင်းမူဘောင်သင့် site မှတဆင့် client များကိုလမ်းပြမယ့်လမ်းညွှန် (သို့မဟုတ်ဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကို post ကို) ပုံနဲ့ဆင်တူတယ်။
မာရိကဂျိန်းသူမ၏ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကို WordPress-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တုံ့ပြန်မှုဘက်စုံသုံးဘာသာရပ်နေရာချထားဖို့ကမျးလှမျးခကျြကို Google မှတတ်၏။ သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်ဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာအောင်ထဲသို့သွင်းထားပြီးပြီကြိုးပမ်း၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်အကောင့်တွင်, post ကိုသင့်ရဲ့မှန်းဆ "20 များအတွက် 2015 အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုကို WordPress Themes" ဟုဂူးဂဲလ်အတွက်ပထမဦးဆုံးပေါ်လာတဲ့, သူက navigate ။
သူမသည်မြေတပြင်လုံး post ကို peruses နှင့်သက်သက်လုပ်ရပ်တွေဟာထဲကသူသည်သင်၏ header ကို, Sidebar နဲ့ footer လမ်းကြောင်း menus တွေကနေအားသာချက်ရယူနိုငျကွောငျးသင့်ရဲ့ WordPress ကိုဘာသာရပ်များစာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုဖို့ရွေးချယ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်သူသည်သင်၏အကြောင်းအရာများမဆိုဝယ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေများသူတုံစဉ်းစားပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လက်ရှိတွင်မာရိသည်ဂျိန်းလျစ်လျူရှု။ ရိုးရှင်းစွာ (ကိုမဆိုနည်းလမ်းများမှတဆင့်) သင့် site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်အချို့သောဒေတာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်သောယောဟန်ကို Doe စဉ်းစားပါ။ ယောဟနျသ Doe သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းမူဘောင်၏နည်းလမ်းဖြင့်သင့် site ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာများရှာဖွေဘို့ကမည်သို့ရိုးရှင်းသောပါသလဲ သငျသညျသူရှာဖွေနေရဲ့အဘယ်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်နိုငျသောဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်ဝှမ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါသလား?
အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုမူဘောင်ဘာမှပေမယ့်အသုံးချနိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာငါဂျာဗားသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းရှာဖွေနေခဲ့တာကဒီတစ်ကြိမ်မှတ်မိဖို့ကူညီပေးသည်သောအခြေခံများနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းက (အမည်မယိုမပါ squealing) ကဒီဂုဏ်သရေရှိ site ပေါ်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
တတ်ကျွမ်းသည့်ကောက်ကြောင်းနှင့်အကျင့်ကိုကျင့် - ဆိုက်ထူးခြားသောကြည့်ရှုကြ၏။ ငါသည်သင်တို့တစ်ခွဲအဖြစ်ကို select ဖို့လုံလောက်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချချင်ပါတယ် site ၏မျိုးကိုဆွေးနွေးတာပါ။ ငါဆင်တူခွဲ, သင်သိဖြားယောင်းသင့်ကြောင်းအခမဲ့ Java ကိုသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းမှရတဲ့တစ်ဦးထိုးနှက်မှုတစ်ခုယူမတိုင်မီမည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Long ကပုံပြင်တိုတို, ညွှန်ကြားချက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစူပါ Menu ထဲမှာအနည်းငယ်အဆင့်ဆင့်ပြည့်နှက်နေလေသည်ခဲ့ပါတယ်, ငါငါစိတ်ရှည်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတယ်သောမြေပေါ်တွင်လိုအပ်သလောက်အချိန်ကို ယူ. , ငါတရားဝင် Java ကိုသင်ကြားပို့ချနေရာချထားရန်အပူတပြင်းခဲ့သည် လေ့ကျင့်ခန်း။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားငါ၏အလိုဆန္ဒများနှင့် ပတ်သက်. တန်းအောင်မပြုခဲ့ကြောင်းတိုက်ပိတ်ဟုတ်ပါတယ်, နေရာချထားရန် menus တွေချတစ်စက်မှတဆင့်တူးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရတယ်။ အုမဲ့။ သွန်၏အဆုံး။
တစ်ဦးကအမှန်တကယ်စည်ကားတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အမှန်တကယ်လိုအပ်အချို့ပိုင်ဆိုင်မှုအဘို့သင့်တပြင်လုံးကိုလမ်းကြောင်းကျော်ကြည့်ဖို့လုံလောက်သောစွမ်းအင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းမူဘောင်အားဖွငျ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဆိုအရေးကြီးသောပစ္စည်းဥစ္စာ staggeringly ရိုးရှင်းသော Make, သင်၏တုံနှုန်းထားများခြောဆင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါအမှနျတစျဆငျ့ကိုချိုးဖောက်သလား ဤတွင် takeaway င်:
ရိုး, ရိုးလမ်းကြောင်း Make
စူပါ menus တွေသို့သော်သင်အမှန်တကယ်သူတို့ကိုလိုအပ်ပါဘူး, ထူးခြားသောကြည့်ရှု?
သင့်ရဲ့ WordPress ကို site ကိုမှတစ်မြေပုံအညွှန်းထည့်ပါ။ သငျသညျ, ဥပမာ, module တွေအသုံးချရန် Google က XML ကိုမြေပုံအညွှန်းသို့မဟုတ်ပွနျလညျပြဇယားတစ်ခုခေါင်းစဉ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ header ကို, footer နှင့် sidebar မှာမှလမ်းကြောင်း menus တွေ Add
အဆိုပါ sidebar မှာမှအတန်း, ဖိုင်တွေနဲ့တံဆိပ်များ Include
တစ်အကာအကွယ် gadget ကသင့်ရဲ့ menus တွေပြားချပ်ချပ်လဲပေးအပ်သောအဖြစ်လိုက်စား box ကိုထည့်သွင်း။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သေတ္တာထိုနည်းတူသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းမူဘောင်များနှင့် client ကိုတှေ့ဆုံမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးရဲ့ module တစ်ခုအသုံးချဥပမာ, Relevanssi သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပြင်းထန်သောနှင့်အတိအကျအင်တာနက်ရှာဖွေသူထုတ်လုပ်
သင်စျေးဝယ်စင်တာကိုသွားသည့်အခါသငျသညျဆငျးရဲသားသို့မဟုတ်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညှို့ပူဇော်ကြောင်းစတိုးဆိုင်များတွင်သင်၏အချိန်ဖြုန်းသလဲ? သင်တို့သည်နောက်သံသယစို့လို့တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, နေမဟုတ်လျှင်ငါသည်သင်တို့ကိုမပါဘူးအာမခံ။
ညံ့ဖျင်းသောပစ္စည်းဥစ္စာပျောက်သင်သည်ထိုသူတို့ကောက်နိုင်သည်ထက် speedier သင့်ရဲ့ perusers ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုသိပါစေ, သင် web ပေါ်မှာလုပ်ဖို့ကတခြားပျော်စရာအရာထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အခါသင်ဆင်းရဲသားတို့ကိုပစ္စည်းဥစ္စာ perusing အဖိုးတန်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မည်လို့ပြောပါ့မလား သင်, Cheezburger အဖြစ်, အခြားသူများအကြား YouTube, နှင့် theCHIVE အပေါ်ထညျ့ feline အသံသွင်းငါသိ၏။ အဘယျသို့ဆငျးရဲသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုတက်စေသည်?
ဟောင်းနွမ်းပစ္စည်းဥစ္စာ - သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဒီဇိုင်းစောင့်ရှောက်ပေးပါ
မလုံလောက်ဓါတ်ပုံတွေကိုစီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း - တစ်ခုမှာအစိတ်အပိုင်းရုပ်ပုံကိုအောက်ပါ 660px ဖြစ်ပါသည်, အကျယ်အတွက် 350px ဖြစ်ပါသည်
ကူးယူအကြောင်းအရာ - ရုပ်ပုံများကိုပါဝင်ပါတယ်။ အကြွေးဝယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှမီဒီယာများနှင့်ဘယ်တော့မှပစ္စည်းဥစ္စာပွား။ ဒါဟာတရားမဝင်ပါပဲ။
အမြိုးမြိုးနဲ့ကွဲပြားခြားနားသော imprudent ကြီးကြပ်အတူစကားများကိုလှိုင်ဘလော့ဂ် entry ကိုရိုးရှင်းစွာ remorseless သောမြေပြင်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြောင်းလဲနှင့်တည်းဖြတ်
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအကြောင်းအရာ၏ decipherability မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစား။ ဥာဏ်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချိတ်ဆက်စာမကျြနှာမှသွားလာရန်တစ်ဦးချင်းစီတိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဘလော့ဂ် entries တွေကိုအောင်နေစဉ် perusers နောက်ထပ် perusing ဘို့ဆက်စပ်အချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်အောင်, အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများနှင့်တံဆိပ်များပါဝင်သည်။ က client ကိုဆည်းကပ်ခြင်းနှင့် SEO ဆိုသည်မှာအားကတည်းကလတ်တလောဥစ္စာနှင့်ဒီဇိုင်းသင့်ရဲ့ Blog ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စိတျထဲမှာသည်းခံကြ၏။
ထို့ပြင်သင်ကတစ်ဦးချင်းစီ၏မှန်ကန်သောစုရုံးအာရုံစိုက်နေတာကိုအာမခံရန်စတင်မှသင်၏ရည်ရွယ်အကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူသင်သောသူတို့အားတုံနှုန်းထားများအပေါ်ရေတိုနှင့်ပုံတက်ရောက်လိမ့်မည်, အမြင်ကျယ်သင့်မျက်မှောက်ထားမည်။
သင့်ရဲ့ WordPress ကို site ပေါ်တွင်တုံနှုန်းကို abatement အားလုံးကြိုးပမ်းသင်သည်မည်သည့်အမှု၌လူများမှားစုရုံးအာရုံစိုက်နေကြသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်ဘာမျှမှစောဒနာလိမ့်မယ်။ ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ငါကြီးပြင်းရာအရပ်, Meru အဘိဓါန်, ကင်ညာအကြောင်းကိုပုံပြင်များဝေမျှဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ငါတောင်ရှာဖွေနေ perusers အတွက်ဆွဲထုတ်ပါဘူးအာမခံမှငါ့ထံသို့မရရှိနိုင်အနီးအနားမှာ SEO ဆိုသည်မှာမဟာဗျူဟာများအသုံးချမယ်လို့ ဥပမာတန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့ Meru အဘိဓါန်။ ပုံသဏ်ဍာနျငါ Tampa, FL ထဲမှာတည်ရှိပြီးကြောင်း Meru အဘိဓါန်ကွန်ယက်ရှာဖွေနေအိန္ဒိယသို့မဟုတ် client များအတွက် Meru အဘိဓါန်တက္ကစီရှာဖွေနေ perusers အတွက်ရေးဆွဲဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။
ငါမှားပရိသတ်ကို (s) ကိုအာရုံစိုက်ပြီးကတည်းကအားလုံး - ငါကြီးပြင်းရာအရပ်ပေါ်မှာတကယ်စိတ်အားထက်သန်နေသောအထွေထွေလူဦးရေ မှလွဲ. လူတိုင်းအတွက်ဆွဲထုတ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, ငါ့ WordPress ကို site ကိုအဆင့်မြင့်တုံနှုန်းထားများစာရင်းသွင်းလိမ့်မယ်။
အတူတူသင့်ရဲ့ PPC မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်တတ်၏။ သင်သည်သင်၏မှားယွင်းတဲ့အာရုံစိုက်ရသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်သင်သည်လိုအပ်လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ. အရာအားလုံးထဲမှာဆွဲရန်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ SEO ဆိုသည်မှာနှင့် PPC ခရူးဆိတ်ပညာသတိရှိသောဖမ်းစားသောစာပိုဒ်များကဆန်းစစ်ပဲ့ထိန်းခံရဖို့သင့်၏။ ကိရိယာများအကြောင်းမေးလျှောက် watchword အသုံးချဥပမာ, ကို Google မှာ AdWords တဲ့ Keyword အစီအစဉျ, သမ်မာကမျြး Tracker, Yoast အခြားသူတွေအကြားအကြံပြုနှင့် KWFinder.com ။
သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့၏နောက်ကျော 2015 နှင့်အပြင်ဤ WordPress ကို SEO ဆိုသည်မှာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်နှင့်အတူလုံခြုံပြီအကျိုးစီးပွားများ၏ရမှတ်ချွေးဖို့မကြိုးစားပါ။ ဒါ့အပြင်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်သိသိသာသာအသုံးအနှုန်းများများအတွက်ထိပ်တန်း positioning ကိုတက်စောင့်ရှောက်အာမခံသင့်ရဲ့ image ကိုသို့မဟုတ်ကို item name ကိုဥပမာ။
နှုန်းထားများ bounce ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်မှုများကိုဖွင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ဆော့အဖြစ်သင့် site မထိုက်မတန်ရဖို့လုပျနိုငျမှုအရာတို့ကိုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏရှိပါတယ်။ ကျိုးဆက်သွယ်မှုပြုပြင်, သင့် interlinking မဟာဗျူဟာနှင့်အဖွင့်ပြင်ပ tabs များသို့ပူးပေါင်းမည်တိုးမြှင့်ကိုစတင်ရန်ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဧည့်သည်ဘယ် website မဆိုစာမျက်နှာသို့မဟုတ် post ကိုအားဖွငျ့သငျ့ရဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှရနိုင်တယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျိုးပဲ့ဆက်သွယ်မှုအမှိုက်သရိုက်များ, သင်၏ WordPress ကို site ကိုလျှင်, သင်၏အလားအလာသူတို့လိုအပ်သည့်ဒေတာများရှာဖွေတွေ့ရှိဘယ်တော့မှမည်, ထို့ကြောင့်, နောက်ကျောဖမ်းနှိပ်ပါ။ သူတို့နောက်ကျောဖမ်းနှိပ်ဆက်ပြီးသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သငျသညျတခုလွယ်ကူသောဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင်းကိုမြင့်သောတုံနှုန်းထားများဆီအကူအညီတောင်းပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ, ဥပမာ, တစ်ဦး module ကိုအသုံးချဖို့လည်းကျိုးဆက်သွယ်မှုများအတွက် Broken Link ကို Checker ကိုသင့်ရဲ့ WordPress ကို site ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ တောင်မှပိုကောင်း, သငျသညျ, ဥပမာအားဖြင့် W3C Link ကို Checker ကိုအွန်လိုင်းမှအုပ်ချုပ်ရေးအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကဖြစ်ပျက် Fore '' ရှည်တုံရပ်တန့်ဖို့လက်လင်းနို့ချွတ်အားလုံးသင့်ရဲ့ကျိုးပဲ့ဆက်သွယ်မှုအခြေချရန်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သျောလညျး, ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်သို့မဟုတ်အချို့သောအခြားအကြောင်းပြချက်အဘယ်သို့တဲ့အခါကွန်နက်ရှင်လပ်ချိန်ညနပေိုငျးအချိန်ဝန်းကျင်လုပ်ဖို့? အမှန်စင်စစ်ကြောင်းရိုးရှင်း - သငျထုံးစံ 404 စာမျက်နှာများကိုအောင်ဒါမှမဟုတ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုမှကျိုးပဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုလွှဲလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေဤပြဿနာကိုတန်ပြန်နိုင်, ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တင်ဆက်မှုစာမျက်နှာင်သို့မဟုတ်သင်မျက်နှာသာသည်အခြားသမျှစာမျက်နှာ။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးရိုးရှင်းသော 404 အဆိုပါလွှဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ module ကို redirect ပြန်ညွှန်းဝှက်ခု WordPress ကိုတစ်ဦးထုံးစံ 301 စာမျက်နှာဖြစ်စေခြင်းငှါလမ်းဖွင့်, ဒီမှာပါပဲ။
တုံနှုန်းကိုမွငျလြှငျအတှငျးရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထင်ရှားဆက်သွယ်မှုဖြည့်စွက်ခြင်း, အပိုင်းစာမျက်နှာကိုချွတ် bounce သူကိုဧည့်သည်များနှုန်းကြောင်းပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာအတိတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပိုပြီးဧည့်သည်များတိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လုပ် backings တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘလော့ဂ် entry ကိုရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်း, သင့်ကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများကနေ connect တွင်, ဆိုက်ရောက်၏ရမှတ်ပါဝင်သည်။
သင်၏နှုတ်ဆက်ခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျော့ကွင်း nibble ဖို့ပြင်ဆင်ထားမဟုတ်သောအလားအလာသင့်ရဲ့ site ကိုမြှင့်တင်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု pertinent ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုပါတယ်အလားအလာများအတွက်ကရိုးရှင်းတဲ့စေသည်။ သူတို့ navigate အခါသင်၏တုံနှုန်းမှာဆငျးသ။
နယူးတဲပ်များအတွက် external Link ကိုဖွင့်
က client ကိုတှေ့ဆုံတက် botched ကတည်းကခင်မှာတစ်အဖြစ်မှန်သို့လှည့် perusing မရွေး, client များဖြင့်အတည်သစ်ကိုပြတင်းပေါက်အတွက်ပြင်ပမှာဆက်သွယ်မှုများကိုဖွင့်လှစ်။ က may အဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည့် perusing ကတည်းကအများအပြားဒေသခံများနှင့်ဝဘ် surfing အပေါငျးတို့သစဉ်ပွင့်လင်းထင်ရှားစွာလွယ်ကူပါတယ်, ပင်ပျော်စရာဖြစ်တယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သိသာတဲ့သင့် client tabs များအားကောင်းမဟောင်းအစီအစဉ်များကိုအသိအမှတျပွုမဟုတ်လျှင်ယနေ့တွင်သင်တို့သည်အသစ် tabs များသည်ပြင်ပမှာကွန်နက်ရှင်ဖွင့်ဖို့ချီတုံချတုံမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသစ်သော tabs များအတွက်ပြင်ဆက်သွယ်မှုဖွင့်ပါဘူးသင့်ရဲ့ WordPress ကို site ပေါ်တွင်တုံနှုန်းထားများခေါ်ခဲ့?
သင်တစ်ဦးအကြီးဘလော့ entry ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်နှင့်တစ်ဦးအပြင် site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီဆိုပါစို့။ တစ်ဦးထွက်ပေါက်တစ်ခုအလားတူအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက် / tab ကို, သိပ္ပံနည်းကျ programming ကိုနံပါတ်များတွင်ဤပြင်ဆက်သွယ်မှုပွင့်လင်းသောဖြစ်ရပ်၌တည်၏။ က may အဖြစ်, သငျသညျသစ်ကို tabs များအတွက်ပြင်ဆက်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင်သင်၏ peruser သင့်ရဲ့ site ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲပြင်ပပစ္စည်းမှမရနိုငျသောရလိမ့်မည်။ ပြင်ဆက်သွယ်မှုအပါအဝင်နေစဉ်, အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်သရုပ်ပြအဖြစ် "ပွင့်လင်းကွန်နက်ရှင်အခြား window ထဲမှာ / tab ကို" checkbox ကို tick:
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုဆိုက်ကိုကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
ဤနေရာတွင်ငါ့ကို Amusingness: သင်တဝိုက်ကပ် (နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်) ပါ့ကပဉ္စမတနျးနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံခဲ့ရသော်လည်းအဖြစ်ပုံ site တစ်ခု? သင့်ရဲ့ site ကိုရှာဖွေနေပျမ်းမျှထက် သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်၌, သင်တစ်ဦးချင်းစီကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဘာဝယ်ယူရန်လုံလုံလောက်လောက်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ကပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။
ဥပမာတစ်ခုပညာရှင်ပီသစွာစီစဉ်ထားခေါင်းစဉ်သို့ကြင်နာစုစုပေါင်းတုံ့ပြန်မှု multipurpose WordPress ကိုဘာသာရပ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဦးတည်းအရင်းအမြစ်များကိုထားပါ။ ဒါ့အပြင်သငျသညျရိုးရှင်းစွာ WordPress.org သို့မဟုတ်ရောင်းသူဥပမာ, Themeforest နှင့်အံဝင်ခွင်ကျ Themes ကနေကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဘာသာရပ်များရနိုင်သည်။
ထို့နောက်တဖန်သင်တို့ကိုဥပမာပထမဦးဆုံးအတန်းအစား WordPress ကိုစာမျက်နှာ developer များအသုံးချဖို့အပိုင်းအစ, ပဲရသေးစုံတွဲတစ်တွဲပြော Visual Composer Beaver သို့မဟုတ် Builder ဖြင့်သင့်ရဲ့ site အပိုင်းအစတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိုနည်းတူဥပမာ, ကမ်ဘာဦးသို့မဟုတ်စာတမ်း WordPress ကိုခေါင်းစဉ်စနစ်များနှင့်အတူလိုက်ပါသောခမ်းနားကလေးငယ်များအတွက်ဘာသာရပ်များအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ (ရိုးရိုးဒီမကြာခဏအများဆုံးအကုန်အကျနှင့်ငွီးငှေ့ဖှယျရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်သတိရလိုအပ်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့လီဆယ်ဖို့တစ်ထိပ်တန်း WordPress ကိုဒီဇိုင်နာအဖြစ်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစား, အခြားရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင်ဘာမျှမဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသံ, သင်တို့ကိုကယ်တင်အချို့ငွေရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင် ) ကိုယ့်ကိုကိုယ် code ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေ၏ရှက်။
သင့်ရဲ့ site ကိုအဆင့်မြှင့်နေစဉ်, အချို့သောလူမှုရေးစိစစ်အတည်ပြုအဖြစ်အပါအဝင်စဉ်းစား; သည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီသည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုမြတ်နိုးဖောက်သည်ကိုပြောပြကြောင်းဘာမှ - နောက်လိုက်, ပရိသတ်တွေ, ခှအရေအတွက်ကို။ သငျသညျသေးကြီးမားတဲ့နံပါတ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောအဖြစ်အပျက်မှာတော့အဖြစ်အနိမ့်ကိန်းဂဏန်းများကိုသင်ရိုးရှင်းစွာရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း client ကိုယုံကြည်မှုလောင်နိုင်ပါတယ်အချို့သောအခြားအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်လူမှုရေးအတည်ပြုချက်ကိုမေ့လျော့စဉ်းစားပါ။
သင်၏နှုတ်ဆက်ခြင်းစာမျက်နှာများတွင်လည်း A / B စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစမ်းသပ်မှုအသုံးချဖို့ Upgrade ။ CTA အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်သင်သည်လျစ်လျူရှုဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့မယ်လို့အရာတစ်ခုမှာသင်၏နှုတ်ဆက်ခြင်းစာမျက်နှာများရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီ conspicuous ဇုန်ဖမျးတယျ။ သုံး CTA ဖမ်းမိတဲ့အများဆုံးအစွန်းရောက်လုံလောက်သောဖြစ်သင့်၏; ဗဟိုမှာအဓိက, တဦးတည်းနှင့်ခြေရင်းဆီသို့ဦးတည်ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းမှာလျင်မြန်စွာတဦးတည်း။
နောက်ကျော site ကို update ကိုမှ, ဖြည့်ညှင်းရှေ့ဆက်, ဒါမှမဟုတ်မာယာကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည် (ဘုရားသခသည်နိစ္စထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေစေခြင်းငှါ) "တိုး၏ encapsulation တွေကိုသေချာအကြွင်းမဲ့အာဏာသက်သာဖြစ်ပါတယ်" ဟုပြောသည်။
trawls အတွက်အလားအလာအတွက်ဆွဲလိမ့်မည်ဟုသူဌေးများနှင့်ရှုပ်ထွေးသော site ကိုဖြစ်စေလိုအပ်ပါသလား? ထိုအခြိနျတှငျသင် web ပေါ်မှာသူကအနည်းဆုံးခက်ခဲဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မှအသုံးချ site ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့အလိုကိုထောကျပံ့သို့မဟုတ်ဖြည့်မကြိုးအစိတ်အပိုင်းများစွန့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် popups နှင့်ပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့်မဟာဗျူဟာမြောက်အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ WordPress ကို site ပေါ်တွင်ကိုးကွယ်သောကြော်ငြာသင့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အထူးဖို့အရေးကြီးလှသည်အာမခံပါသည်။ အဆိုပါ sidebar မှာအပေါ်သိသာထင်ရှားသောပရိုမိုးရှင်း ထား. , သငျသညျ, Self-stacking မျက်မှောက်အသံကြော်ငြာနေတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အကွာအဝေးထိနျးသိမျးထားနိုငျသောဖြစ်ရပ်၌တည်၏။
အားလုံးပြောပါတယ်ပြုသည့်အခါအမှတ်မှာသင့်ရဲ့ site အကောင့်သို့ desktop နဲ့စွယ်စုံ clients များနှစ်မျိုးလုံးကိုယူနိုင်ရန်အတွက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်အာမခံပါသည်။ ယင်းကိုစတင်ထံမှ (ဥပမာ, စုစုပေါင်း), တစ်တုံ့ပြန်မှု WordPress ကိုဘာသာရပ်ရွေးပါ။ အာမခံချက်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုကောက်သည့် module တွေဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်တိုးတက်နေကြသည်။
ကျမ်းပိုဒ်စာမျက်နှာအတိတ်သွားကြဖို့အလားအလာလိုအပ်ပါသလား? ထိုအခြိနျတှငျကရိုးရှင်းပြီးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အစေ။ သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ် entry ကို၏အဆုံးဆီသို့သို့မဟုတ်သင့် sidebar မှာပေါ်ဆက်စပ် post ကို gadgets ထားနိုင်သည် - ရိုးရိုးသူတို့သည်သင်၏ perusers မှသိသာနေအာမခံပါသည်။ ထင်ရှားသောသတင်းသင်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သောကြိုးပမ်းမှုစေရန်မလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ပါသည်, အမှန်တကယ်ခက်ခဲအလုပ်နှင့်အတူအကူအညီအပေါ်အဆုံးမဲ့ WordPress ကို related လက်ဆောင် module တွေရှိပါတယ်။
ဒီသိသိသာသာနဲ့အတူစတင်မှာသင့်ရဲ့တုံနှုန်းထားများမထိခိုက်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဘလော့ဂ်သဘောထားမှတ်ချက်သင့်ရဲ့တုံနှုန်းကိုနှိမ့်ချတတ်၏သောရှည်လျားသောခရီး, ကျော် client ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ client များစောင့်ရှောက်သည့်အခါဘလော့ဂ်အစိတ်အပိုင်းမှတဆင့်အတွက်ဆွဲငင်, သူတို့ကခြောသင့် Blog မှာပိုစွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပိုမိုသင်တို့သည်ယုံကြည်နှင့်အခြားသူများရန်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတစုံတခုကိုအပ်ပေးခြင်းပါလိမ့်မယ်။
သို့လှည့်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သင့်ခူးလယ်ပြင်၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်အကြောင်းကို - ဒါဟာသင့်ရဲ့အလားအလာသင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမကအခြားတူသောဇာတ်ခင်းပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပါပဲ။
သင်သည်သင်၏ဥစ္စာနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ, သင့်အလားအလာ '' အစီအစဉ်ကိုသြဒိနိတ်, ထိုနောကျမှကကောငျးကငျအောကျမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးတက်ခြုံအခါသင်၏ WordPress ကိုတုံနှုန်းထားများလျော့ကျလာမှသင်တို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။
အဆိုပါအကြံပေးချက်များသည်ယနေ့ဤနေရာတွင်ထွက်ချထားပြီးနောက် ယူ. , သင်မျှဝေတဲ့အစွန်အဖျား, ဒါမှမဟုတ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်သင့်အောက်မှတ်ချက်ဧရိယာအသုံးချတှနျ့ဆုတျဘူးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားစကားကိုနားထောငျဖို့ခစျြတင့် - နုတ်ဆက်ပါတယ်-နုတ်ဆက်ပါတယ်!
အဆိုပါရာသီ TIS Google က Doodle အားလပ်ရက်၏ Start ကိုပွဲပြုလုပ်